Kedu ihe dị iche n'etiti Tween 80 na Tween 20?
Ka anyị mụta banyere Tween 80 (nke a makwaara dị ka Tween 80 ma ọ bụ polysorbate 80) na Tween 20 (nke a makwaara dị ka Tween 20) n’ụzọ atọ dị iche iche.
1。 Nkọwa nke Tween 80 dabeere na polymerization nke desaturated sorbitol monooleate na ethylene oxide. Nkọwa nke Tween 20: ngwakọta nke polyethylene glycol na akụkụ nke polyethylene glycol. N'etiti 80 bụ ụdị polyol nonionic surfactant, nke a na-ejikarị polysorbate. A na-ejikarị ya eme ihe na mmiri mmiri, nke siri ike ma sie ike, dị ka emulsifier O / W, solubilizer, wetting agent, dispersant na stabilizer.
2. N'etiti 20 na-eji: maka odide nke diski na ethylene oxide, n'ihi na ụmụ irighiri ya nwere ọtụtụ hydrophilic polyoxyethylene dị iche iche, n'ihi ya, ọ nwere hydrophilicity siri ike, dị ka ihe na-abụghị ionic. A na-ejikarị ya dị ka O / W emulsifier, enwere ike iji ya na njikọ iri na abụọ alkyl sulfate ma ọ bụ ụdị emulsifier dị iche iche iji melite nkwụsi ike emulsion. Enwere ike iji ya dị ka ihe edozi maka ọgwụ ụfọdụ. Uma nke Tween 80: uru peroxide nke Tween 80 abụghị ihe karịrị 10, nke bụ odo odo na mmiri mmiri viscous oroma; o nwuru ufu. Obere uto ilu, enwere mmetụta na-ekpo ọkụ. Ọ bụ soluble na mmiri, ethanol, methanol ma ọ bụ ethyl acetate, ma soluble na ịnweta mmanụ.
Post oge: Nov-11-2020